बाबुले बो’काए आफ्नै १७ बर्षिया छोरीलाई ग’र्भ, छोरीले ज’न्माइन छोरा… हेर्नुहोस् !! – News Nepali Dainik
बाबुले बो’काए आफ्नै १७ बर्षिया छोरीलाई ग’र्भ, छोरीले ज’न्माइन छोरा… हेर्नुहोस् !!
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०२, २०७७ समय: १५:४९:४९
चार छोरी मध्ये उनि माईली हुन् । एउटी छोरीको रामेछापको मन्थलीमै विवाह भएको छ ।‘उसलाई प्रहरीले थुनेपछि हामीले देहत्याग गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन’–बालिकाको आमाले प्रहरीलाई बताईन । तत्काल प्रहरीले उनि सहित बच्चाहरुलाई ओरेक नेपाल मार्फत माईती नेपालको जिम्मा लगाएको छ । बालिकाको आमाको पिसिआर परिक्षण पछि मात्रै पठाईने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता डिएस्पी कुमार विक्रम थापाले बताउनु भयो । न्युजअफबाट
Last Updated on: March 15th, 2021 at 3:49 pm